Articles | Siyin Chin Baptist Church
Ka pa le ka nu hong kha-khaam kawm panma, kum 18 ka cin ni ciang, ka topsa sum tawm le ka zak tawm tu vanh pawl khat, ka Volkswagen mortor no tungah heang in ka pusuak hi. Keima le keima nungta tong ci in ka pa ka nu inn pan ka pusuak aa, California sang … Continue reading →
Jesu A Nial Mihing 2
Sizang/Siyin Bible | Thawngno Lai Thiangtho sungah TOPA Jesuathi nai ciang nungzui 12 om sung pan2na nial hi. Peter le Judas Iscariot hi. Peter in Jesu he ngei bong, kithawl ngei bong ci in zing sang aklui khuan maa3vei dongtak nial a, Judas Iscariot in Topa nial in dangka … Continue reading →
Church Pastor Report
Posted by thawngno ⋅ June 6, 2016 ⋅ Leaveacomment
Na thinsung uh chi le sa deina in na uk sak uh le thina piang a; na thinsung Thaa inauk le, nuntakna le thin nopna piang hi. Tua ahiciang mihing khat sia,athin sungah chi le sa deina inauk le Pathian ngal suak hi; banghangziam cile ama in Pathian thukham … Continue reading →
US SIZANG TUIPHUM PAWLPI tangthu ih son tu ciang ih kipatna bulpi ahi Zo/Chin buppi ih, ih Tapidaw Pu le Pi te makngil thei tu ahi bua hi. Zo ngam bup Tapidaw suak masa phitbel sia ih heakteksa bangma Pu Pau Suan le Pi Kham Ciang 10th July 1904 leh Pu Thuam Hang le Pi … Continue reading →
Posted by thawngno ⋅ April 25, 2014 ⋅ 1 Comment
Thumaisot Leitung ah ih pianniakipan thinngimna lungngimna, natna satna, zawnna ngauna, thina bona hong pia bek hi ngawlin, ih thi zawkciang ih thaa hell sung hong thenpa Satan ii thu sia ih heak ngawl, ih kat ngawl, ih tel ngawlin phamaw hi. Ama khut sung ih thet thaak ngawl natu le, ama khut … Continue reading →
Kihilhna sia kampau taw ahizong, laibu sungahaki-at tatuamte taw ahizong kizangh thei hi. Bangpo hi zong, kihilhna theampo te sia siat natu hi ngawl a, phat natu, hoi natu, thinnop natu, lungdam natu, maipha nga natu, pil natu, ciim natu, khanto natu, cidam natu, thahat natu, khansau natu, hau natu, ci bang vive … Continue reading →
Sapna Sawlna (Calling, Sending)
Posted by thawngno ⋅ May 7, 2013 ⋅ Leaveacomment
By Thuantak Tulpipa Sizang ih pu ih pa te in Doai na bia a, bia thathong ngawlin, palai ahi Tulpi seam, hiampi seam ma na ha koi hi. Banghangziam cile seamkhial tha leaseam pa in thuak hi. Tua ahikom Tulpi seam tu sia kuama uuk ngawl hi. Tulpiaseam sia ina… Continue reading →
By Rev. James Nang Khai Keima in Sapitngui hi a, note inabaakte na hi uh hi. A kuama po in kei sungah hong om a, ama sungah kei ka om le ama in nga tampi nga tu hi. Banghangziam cile kei ngawl taw bangma na vawt thei buatu uh hi. (John 15:5)
By Vum Khat Pau ZBC (CBC) ii Mission nasepna nung lee et kik pak leang 1983akipan Chins for Christ in One Century (CCOC) ci in kipai sak a, Carson sangmangpa ii Zongam hong thet kum 100 cin poai 1999 kumin maa kizial hi. CCOC nasepna sia Zongam sungatuan in Zongam thangsang … Continue reading →
By Tg. Pum Za Nang Thu masa in phawtu zawna sia mihingte kipiak thathong thei hi ngawl a, Pathian aa, Pathian neisa, Pathian kung pan bekakinga thei ci sia ciamtee tek masa tawng. Lai Thiangtho OT sung Israel mite nuntakna ih et ciangatamzawahun uh sia ngalsimna in na zangh … Continue reading →
A3Veina SCC Taw Kisai Thu Zaaksakna
Posted by thawngno ⋅ August 17, 2011 ⋅ Leaveacomment
Posted by thawngno ⋅ June 18, 2011 ⋅ Leaveacomment
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ မစ္စဂျွန်ဘရု(စ်)ဒေါ့(ဒ်) Mrs.John Bruce Dodd သည်မိခင်များကို မေလဒုတိယအပတ်တွင် မိခင်များနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ဂုဏ်ပြုသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့် ဖခင်များကိုလည်း ထိုနည်းတူ နေ့တစ်နေ့ကို ဖခင်များနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်သင့်ကြောင်း စိတ်ထဲတွင် ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူမ၏ မိခင်သည် သူတို့မောင်နှမ ငါးယောက် ကလေးဘဝတွင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။ သူတို့ဖခင်သည် သားသမီး ငါးယောက်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့ပါသည်။
Posted by thawngno ⋅ June 17, 2011 ⋅ Leaveacomment
PDF version for who does not have Burmese font ဤကမ္ဘာပေါ်၌ ဘာသာရေးမြောက်များစွာရှိသည်။ ဘာသာတိုင်း၌ အချက်ကြီးသုံးချက်ရှိသည်။ ၄င်းတို့မှာ (က) ယုံကြည်လက်ခံခြင်း (Doctrine) (ခ) ကိုးကွယ်ခြင်း (Rites) နှင့် (ဂ) ကျင့်ကြံခြင်း (Ethics) များဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးဟူသမျှ၌ အထက်ပါအချက်များ ရှိစမြဲဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာရေး တစ်ခုစီ၌ အထက်ပါ အချက်များအပေါ် ဦးစားပေးခြင်း မတူညီကြပါ။ တစ်ချို့သည် ယုံကြည်ခြင်း (Doctrine)၊ တစ်ချို့သည် ကိုးကွယ်ခြင်း (Rites) နှင့် တစ်ချို့သည် ကျင့်ကြံခြင်း (Ethics) တစ်ခုခု ဦးစားပေးတတ်ကြပါသည်။ သို့ရာတွင် တစ်ခုကိုမျှ ပစ်ပယ်၍မရပါ။ အထက်ပါအချက်များအနက် တစ်ခုခု မပါရှိပါက ဘာသာရေးမဟုတ်တော့ပဲ၊ စဉ်းစားဥာဏ် (ideology) … Continue reading →
Posted by thawngno ⋅ June 10, 2011 ⋅ Leaveacomment
ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့် အခြားသူများ လိုချင်သည့်ပုံစံအတိုင်း ဘ၀ခရီးလှမ်းခြင်း။ မနေ့က ကျွန်တော် တစ်ခု သတိပြုမိတယ်။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုတော့ နတ်ဆိုးဟာ မိတ်ဆွေရဲ့ ဘ၀၊ အလုပ်အကိုင်၊ မိသားစုခရီးမှာ ၀မ်းမြောက်ခြင်းကို ခိုးယူဖို့ ကြိုးစားနေတာပါပဲ။ နတ်ဆိုးသုံးတဲ့ နည်းတစ်နည်းကတော့ မိတ်ဆွေရဲ့ ဘ၀၊အလုပ်အကိုင်၊ မိသားစုခရီ လုပ်ရပ်ကို အခြားသူများရဲ့ လုပ်ရပ်များနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်လိုစိတ်ကို မွေးပေးမယ်။ နောက်တစ်နည်းကတော့ အခြားသူများရဲ့ လိုချင်တဲ့ ပုံစံအတိုင်း လုပ်ဖို့ ဖျားယောင်းလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းနှစ်နည်းလုံးဟာ နတ်ဆိုးရဲ့ သေမင်းထောင်ချောက်တွေဖြစ်ပြီး မိတ်ဆွေအတွက် ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ဘ၀ကံတရား or (ဘုရားသခင် ကောင်းမြတ်စေခြင်း) လမ်းကြောင်းကို သွေဖည်သွားစေမဲ့ အရာများ ဖြစ်ပါတယ်။